OwamaKhomanisi uthi abakaKhongolose kufanele balindele ukutabalasa - Bayede News
Isithombe: nguLeon Lestrade/ANA
Kusemqoka ukuhlala kunegazi elanele
UNobhala wenhlangano yamaKhomanisi esifundazweni iKwaZulu- Natal, uMnu uThemba Mthembu, uthi kusekuningi ukugoloza nokungahloniphi i-African National Congress (ANC) esazobhekana nakho njengoba isohlelweni lokubuyisa isithunzi sayo ngokuthi labo abanamacala bavele phambili kwekomidi lokuziphatha noma bashenxe ukuze kucutshungulwe ubucayi bamacala abo.
UMthembu ukusho lokhu kwelaboHlanga eliwathungathe laze lawathola amabovu njengoba ubungasazwakakili umsindo wawo ngokuphathelene nezombusazwe eziqhubeka KwaZulu-Natal njengoba kwaziwa ukuthi ayiso nesiseko senhlangano ebusayo.
UMvelase uthe kuningi abaphawule kuko ngezigameko eziphathelene nezombangazwe esifundazweni okubalwa kuzo ukuziqhelanisa nalabo ababesabalalisa izingqwembe ezinkundleni zokuxhumana zinemibhalo eseka labo abatholwe bebhekene nanamacala enkohlakalo uKhongolose athe abake bame eceleni okubalwa kubo lowo owayeyiMeya yeTheku uNkk uZandile KaMajola Gumede.
Uthe ukugoloza kulabo abazotholwa benamacala yinto okufanele ihlale ilindelwe ngoba abantu bacabanga isinkwa bakhohlwe ukuthi izikhundla abakuzo baziphathisiwe.
Ekhuluma neBAYEDE uthe njengoba sekunalolu hlelo ngeke kube kuhle kwabanye ngoba kusho ukuphela kwesinkwa ngoba yinto eyaziwayo ukuthi iningi labanye abangaphakathi enhlanganweni kalihlalanga ngenhloso yokuthuthukisa imiphakathi kepha langena ku-ANC ngenhloso yokuzithuthukisa nemindeni nabangani babo.
“Yingakho lolu hlelo luzokuba ngathi yimpi kwabanye bacabange ukuthi bayajahwa kanti cha akunjalo uKhongolose usezinhlelweni zokuthi ubuye uthembeke kubantu njengenhlangano yabantu kugwemeke inkohlakalo njengoba usezandleni zabantu abangathembekile abanye babo ababhekene namacala ezinkantolo,” kusho uMthembu.
Uthe lezo izinqumo abazeseka kakhulu ezenze ukuthi baqhubeke nokusebenza ngokubambisana nenhlangano okhethweni lomasipala lwangonyaka ozayo kodwa lokho kuyoba yimpumelelo uma i-ANC izoqhubeka nokwenza okufunwa abantu.
Uthe phakathi kwalezo zinto abazifunayo ukuthi kube abantu abazikhethela ngokwabo ukuthi bafuna ukuholwa ubani, onjani, wakuphi kuphele lo mkhuba wabantu abamiswa emasangweni kuntshontshwe imihlangano ngoba kunezinhloso zokuthi kufanele kungene igama lothile kungakhathaleki ukuthi ithini imizwa yabantu. Ukhuluma lokhu nje ubuholi beSACP esifundeni iHarry Gwala (Thembisile Hani ngokwamaKhomanisi) busanda kumemezela ukuthi buzosebenza ngokubambisana ne-ANC okhethweni uma izovumela ukuthi kukhethwe amakhansela afunwa abantu futhi aqotho.
“Uyabona kubole kangaka nje komasipala ukuthi kwafakwa abantu ababolile abagcwele inkohlakalo ngokhetho olwedlule nabangenawo unembeza bangena benezinhloso zabo ebukhanseleni kabayanga ngezinhloso zokuthuthukisa imiphakathi yingakho sibhekene nezinkinga nje,” kusho uMvelase.
Ukhuluma lokhu nje i-ANC ibhekene nengwadla esifundazweni i-Eastern Cape njengoba iKhansela loMkhandlu iNelson Mandela Bay, uMnu u-Andile Lungisa, egoloza ukusula enhlanganweni yize wanikwa umyalelo ubuholi besifunda namagatsha akubeka kwacaca ukuthi akasamdingi.
Ukususwa kwakhe kulandela ukulahlwa yicala lokushaya ikhansela lenhlangano ephikisayo iDemocratic Alliance (DA) alishaya ngojeke waze wavulelwa inxeba lokushaya ngenhloso yokulimaza.
Khonamanjalo, kuchithwe nesicelo sakhe yiNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala njengoba ebenikwe amahora angama-48 ngoLwesithathu ukuthi azinikele ejele laseBhayi lapho eyoqala khona isigwebo sakhe seminyaka emibili.
UMvelase uthe izinyathelo ezithathiwe ngamakhansela ambandakanyeka enkohlakalweni zibonisa ukuthi ubuholi bukubona kubalulekile ukubuyisa isithunzi senhlangano yingakho nabo befuna ukuthi iqinise ekutheni amakhansela akhethwayo kusetshenziswe intando yabantu hhayi eyosopolitiki abanezifiso zabo.
Uthe ngeke bayeke ukukhuluma uma kukhona lapho ingenzi kahle khona i-ANC ngoba bawumbimbi futhi kuwumthwalo wabo ukuqinisekisa ukuthi okwenziwa yinhlangano abayesekayo kuwubulungiswa.
“Yingakho ubonile ukuthi kasizange sizifake odabeni lwalabo abasabalalisa izingqwembe ezinkundleni zokuxhumana zokweseka labo abatholwe benebala yi-ANC nabahamba amacala ezinkantolo,” kusho uMthembu.
UMvelase ukhuluma lokhu nje kusalindelwe imibiko ngamakhansela ezinye izifundazwe okubalwa kuzo neKwaZulu- Natal abhekene namacala navela kumqulu osihloko sithi: National Executive Committee 28-30 Volume 1B Provincial Report: Criminal & Disciplinary Cases obuhlalelwe isigungu esiphezulu se-ANC emasontweni edlule, usuqedile ngamakhansela esifundazwe sase-Eastern Cape okubalwa kuwo noLungisa kanye nawaseGoli.
Yize selukhona uhlu lwamakhansela aKwaZulu-Natal kodwa lusacutshungulwa njengoba uNobhala we-ANC esifundazweni, uMnu uMdumiseni Ntuli, ekubeke kwacaca ukuthi kube khona ushintsho ngabanye abasohlwini abatholwe izinkantolo bengenamacala yingakho izinqumo ezizothathwa kufanele zibhekisiswe zingacindezeli amanye amalungu athintekayo. Uthe bangase bathathe cishe isikhathi esinganga masonto amabili ukwenza lokho.